ဘယ်သငျသညျ, လျှပ်စစ် Scooter ကြိုက်တတ်တဲ့သို့မဟုတ်စကိတ်ကြဘူး - Jomo နည်းပညာ Co. , Ltd မှ
ဘယ်သငျသညျ, လျှပ်စစ် Scooter သို့မဟုတ်စကိတ်ကိုပိုနှစ်သက်ကြပါ
အတော်များများအွန်လိုင်းစတိုးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့စတင်ပါပြီ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချိန်ခွင်ညှိဆိုင်ကယ် တစ်ကြိမ်ပို hoverboards ။ အသံတိတ်စကူတာတို့သည်, အကြောင်းပြချက်မှာစျေးနှုန်း, ချုပ်အရည်အသွေးကို Avenue-ဥပဒေရေးရာတတ်၏ Koowheel green electric scooters ဥရောပမှတင်ပို့မှု။ အဆိုပါလက်သို့မဟုတ်ခွကေို-operated ဘရိတ်ချိန်ခွင်လျှာသွန်းခြင်းမရှိဘဲချက်ချင်း Scooter ကိုရပ်တန့်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်အားဖြင့်သင်တို့ကိုရှေ့တော်ထဲကသင့်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုကို Scooter စွန့်ခွာနိုင်ဖြစ်နှင့်သင်တစ်ကြိမ်သာပိုပြီးခလုတ်ကိုနှိပ်တိုင်အောင်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေအဖြစ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကြောင့်ဝေးစီးမညျဖွစျကွောငျးကိုကွောကျရှံ့ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကား, ဤပုဂ္ဂလိကပို့ဆောင်ရေးမှတညျဆောကျပါလိမ့်မည်အလွန်ထိပ်တန်းစံချိန်စံညွှန်းမှဆောက်လုပ်ထားကြသည်, ထိုသို့တညျးဟူသောအမှတ်တံဆိပ်များစွာရှိသည်သောလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမဆိုမရှိပါ။ စိတ်ကိုတစ်ဦးအစားထိုးအဖြစ် microprocessor များဟာမော်တာမှနိမိတ်လက္ခဏာတင်ပို့ရန်အခါဆိုင်ကယ်ကိုလည်းတူညီမူအရလုပ်နေကြသည်။
လျှပ်စစ် foldable Scooter သူတို့များသောအားဖြင့်ခက်ခဲတဲ့ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများထားကြပါတယ်ကျနော်တို့အလားအလာဒဏ်ရာဖြစ်ပေါ်စေခြင်းအလိုငှါများစွာသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ဘူးကတည်းကပင်စက်ဘီးထက်ပိုမိုလုံခြုံဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်မြင်းစီးသူရဲကိုသင်ခန်းစာနှင့်အတူပြီးစီးစေခြင်းငှါပြီးနောက်ထို့နောက်သင် app ရဲ့အင်္ဂါရပ်အားလုံးနှစ်သက်ယူနိုငျသညျ။ လူငယ်များသည်များအတွက်အကောင်းဆုံးသုံး Scooter ရဲ့ရွေးချယ်မှုများကဘာတွေလဲ? ကိုအဆစ်အရိုးနုဒဏ်ရာဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါဒဏ်ရာနှင့်ရေရှည်ပြဿနာများကို compression ကိုပိုမိုခံထိုက်ပေဖြစ်ကြသည်သောကြောင့်, ကလေးအထူးကုအထူးသဖြင့်အဘယ်သူ၏အဆစ်အန္တရာယ်ပြီးသားဖြစ်ကြောင်းအဝလွန်လူငယ်အဘို့, အနိမ့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလေ့ကျင့်ခန်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ သငျသညျငုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်သောအခါအဘယ်သူသည်သင့်လျော်သော, လမ်းလျှောက်ဖို့လိုသည်? Hoverboards လည်းဘီးများအမျိုးမျိုးအတွင်းမှာအမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။ အတော်များများကဒီတော့အမေရိကန်အတွင်းရောက်ရှိမည် 7-12 ရက်အတွင်းယူပါလိမ့်မယ်တရုတ်ထံမှတိုက်ရိုက်တင်ပို့နေကြသည်။ သငျသညျကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်လယ်ရပ်ခြားဂိုဒေါင်ထဲမှာ hoverboard ကောက်လို့ရပါတယ်။ များစွာသောလူငယ်နှင့်လူကြီးများရှေ့တွင်ယာဘရိတ်ရှိသည်စက်ဘီးကိုစီးဖို့အသုံးပြုနေကြသည်သွားရမည်အကြောင်း, နောက်ဘက်-ယာဘရိတ်ပင်ပိုမိုလုံခြုံသည်နှင့်ချက်ချင်းရပ်တန့်သော်လည်းရှေ့သို့ပစ်ချခံရငယ်တဦးတည်း၏အန္တရာယ်ကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ ၎င်း၏နီးပါးမည်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ချုပ်ကိုင်ထားတစျခုအတှကျဧရာ Threaded တာယာပင်သမုဒ္ဒရာနှင့်အတူဒီဇိုင်း! သင်ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်တဲ့ငယ်လေးတစ်ဝေးလံသောစီမံခန့်ခွဲမှုဒါ့အပြင်ရှိပါတယ် လျှပ်စစ်စကိတ်စီး.
ကျနော်တို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကဏ္ဍအတွက်အများဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိဒီဇိုင်းန်ထမ်းပါတယ်, ကြှနျုပျတို့ကိုတောင်စိုးရိမ်ရဘက်မလိုက်မူပိုင်ကျွမ်းကျင်မှု, ဖြောင့်ထုတ်ကုန်သေချာပေးသောအဆင့်မြင့်စစ်ဆေးမှုများပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းရှိသည်။ အဲဒီမှာဒီ Self-ဟန်ချက်ညီ tools တွေကိုသုံးပြီးနာမည်ကြီးတွေအများကြီးဖြစ်ကြပြီးဒီကိရိယာကိုအများဆုံး (2018) ဒီနှစ်အားလပ်ရက်ဝယ်ယူမှုကိစ္စရပ်များကိုမြှင့်တင်မေတ္တာရပ်ခံနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်လာရန်ကြီးပွားသတည်း။ အများဆုံး E1 အလွန်အမင်းလူငယ်အများစုကချီးကျူးသည်။ ကိုယ့်အပေါ် step ကိုသင်မိနစ်ခရီးတစ်ခုကိုနိုင်စွမ်းရှိသည်လိမ့်မယ်, စီးနင်းလေ့လာနေသည့်နေ့စဉ်သုံးမှသာ 3-5 မိနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ပင်ပန်းစီးနင်းပါကခေါက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အလွန်အဆင်ပြေသည်။
နောက်ထပ်ဖြစ်ပါတယ် ကြိုးမဲ့ဝေးလံသောလျှပ်စစ်စကိတ်စီး , ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဦးဆောင်အတူ maximumly မက်မြန်နှုန်းမှာ 42 / ဇအအေးမော်တာကိုကူညီသပိတ်နှင့်လူမျိုး၏စဉ်းစားများနှင့်အညီအလုပ်လုပ်တယ်လိမ့်မယ်အစားထိုးမှ PU ဘီးထူးခြားသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူ။ ဒီစကိတ်စီးနောက်ကွယ်မှန်ထမ်း "ဟုသူကခေါ်ဆို အန္တိမလျှပ်စစ်စကိတ်စီး ," နှင့်ကျွန်တော်အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုဖို့အကြောင်းပါပဲ။ အဆိုပါ KOOWHEL လျှပ်စစ်စကိတ်စီး သည်ယခုအခါ dual-မော်တာနှင့်တကွကြွလာ! လျှပ်စစ်စကိတ်စီးအလုအယက်နာရီသင်တန်းတွင်သိသာအပို, ပိုပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေသည်။ သင်တစ်ဦးအားလပ်ချိန်မှာဘက်ထရီယ်ယူနိုင်ပါသည်။ လျှင်, သင်ကသုံးပြီးပြီးနောက်ဘက်ထရီထဲက running စိုးရိမ်ကြပါဘူး။
Post ကိုအချိန်: ဖေဖော်ဝါရီ-01-2018